Ihe omuma ihe omuma ihe mere mmadu kwesiri iji gbasaa bots ma webwuru Crawlers
Ọ dị mma ịsị na ọtụtụ echiche ndị na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị si n'aka ndị na-abụghị mmadụ na ndị na-abụghị ezigbo isi mmalite, nke ahụ adịghị mma n'ihi na ị ga-ewepu ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ebe nrụọrụ weebụ gị na-eto eto maka ndụ niile. Ọ bụrụ na ị na-eche na ịzụ bọtịnụ dị mma na nke a pụrụ ịdabere na ya, ị na-eme nnukwu ndudue dịka ọ nwere ike ime ka Google kwụsị ọrụ AdSense gị. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụ bọtịnụ ahụ dị ka njem mmadụ na Google Analytics, mana ọ bụghị ikpe ọnwa gara aga - free logo maker online free logo creator. N'ụbọchị ndị a, ihe karịrị pasent 70 nke okporo ụzọ site na obere weebụsaịtị sitere na bots na isi mmalite. Max Bell, ọkachamara dị elu , dọrọ gị aka ná ntị na bọọlụ na - agbalịrị ịbanye na saịtị gị n'ọtụtụ ụzọ, ọ gaghị enwe ike ikpochapụ ha.
Ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke bọọlụ ndị na-aga na saịtị gị abụghị ihe efu ma ọ bụ ihe efu; Ọbụna ha bara uru maka ibe weebụ gị ma ọ bụrụ na ha abata obere ego. Dị ka ihe atụ, Google na-eji ụfọdụ bọtịnụ ndị dị mma iji nweta ọdịnaya ọhụrụ na ntanetị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ nile search engine jiri ezigbo bọtịnụ chọpụta àgwà nke isiokwu. Uzo ha choputara ogo agbanweela, ugbua ha na - eji ojiji nke oru ngwanro..Ndị swarms na-eso njikọ, na-awụli site n'otu saịtị gaa na nke ọzọ, na ederede ọhụrụ ma gbanwee ọdịnaya. Ntugharị Google nwere mgbagwoju anya, na nhazi nke iwu ndị nwere ike ịchịkwa àgwà ha. Dịka ọmụmaatụ, iwu NoFollow na njikọ ahụ na-eme ka ha dị irè ma bụrụ ndị a na-apụghị ịhụ anya na bọtịnụ Google
Bad bots bụ ndị na-emebi saịtị gị ma ghara inye uru ọ bụla. A na-achọpụta ha n'amaghị ama ma na-edepụta aha ha na-akpaghị aka. E gosipụtara ọdịnaya gị ma ụmụ mmadụ na bọọlụ, na-eleghara àgwà na eziokwu anya. Ụgbụ ọjọọ ndị ahụ na-eleghara nduzi robot anya ma ghara iji ihe ntinye IP iji nọgide na-enwe ihuenyo weebụ gị. Otu n'ime nsogbu ndị kachasị na bọmbụ ndị a bụ na ihe siri ike ịkọwapụta na ọ na-ezoro ya n'ihu ọha ka ọ na-emeghe maka ndị na-agba ọsọ nwere ike ịnweta faịlụ gị iji mee ka usoro gị kwụsị. Enwere bom nke spam kwa nke nwere ike imebi onodu ogugu gi. Ha juputara na ozi gi ndi choputara, na-eme ka ndi oru ahia kwenye.
I Kwesịrị Ịgbachi Bọọlụ?
Ọ bụrụ na ị na-enweta nkwenye mgbe niile site na ezi bọtịnụ, ha nwere ike ọ gaghị adị mkpa iji gbochie. Ma ọ bụrụ na ị na-enweta echiche site na bots ọjọọ, ị nwere ike ịtụle igbochi ha. I kwesịrị igbochi Googlebot, nke dị n'ebe ahụ iji wepụ saịtị gị site na njikwa ọchụchọ. N'aka nke ọzọ, ị ghaghị igbochi spambots. Ọ bụrụ na ị maara banyere nchebe nke saịtị gị site na DDOSing, ọ dị mkpa igbochi adreesị IP nke bọọlụ na spammers. Cheta mgbe niile na bọọlụ ọjọọ ahụ agaghị eche banyere faịlụ robot.txt gị, nke bụ ezigbo nzukọ ebe ọ bụ na nchekwa nke faịlụ a dị mkpa maka uto gị na arụmọrụ ya niile.